निलो आकाशका लागि सफा एयरको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको बारेमा संयुक्त राष्ट्र महासचिवको सन्देश - ब्रेथलिफ २०2030०
सञ्जाल अपडेट / न्यूयोर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका / 2020-09-07
नीलो आकाशको लागि सफा एयरको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिवको सन्देश:
संयुक्त राष्ट्र स Secretary्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले किन वायु प्रदूषण रोक्न सक्ने जोखिम हो भनेर रूपरेखा बनायो। सधैका लागि सफा हावामा उत्तम भविष्य निर्माण गर्न उहाँ हामी सबै मिलेर काम गर्न आमन्त्रित गर्नुहुन्छ
द्वारा कहानी जलवायु र स्वच्छ वायु गठबन्धन.
September सेप्टेम्बर २०२० मा, पहिलो पटक, संयुक्त राष्ट्र संघको रूपमा चिह्न गर्न विश्व एकसाथ भेला हुनेछ निलो आकाशका लागि सफा एयरको अन्तर्राष्ट्रिय दिन। २०२० को लागि विषयवस्तु हो "सबैका लागि सफा एयर".
संयुक्त राष्ट्र स Secretary्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले किन वायु प्रदूषण रोक्न सक्ने जोखिम हो भनेर रूपरेखा बनायो। सधैका लागि सफा हावामा उत्तम भविष्य निर्माण गर्न उहाँ हामी सबै मिलेर काम गर्न आमन्त्रित गर्नुहुन्छ।
“विश्वभरि, हरेक १० मध्ये नौ जनाले अशुद्ध हावाको सास लिन्छन्। वायु प्रदूषणले मुटु रोग, स्ट्रोक, फोक्सोको क्यान्सर र अन्य श्वासप्रश्वासका रोगहरूमा योगदान पुर्‍याउँछ। यसले प्रत्येक वर्ष अनुमानित million० लाख समयपूर्व मृत्यु हुने गर्दछ, मुख्यत: कम र मध्यम आय भएका देशहरूमा। वायु प्रदूषणले अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा र वातावरणलाई पनि खतरामा पार्दछ।
जसरी हामी कोरोनाभाइरस महामारीबाट मुक्त हुन्छौं, विश्वले वायु प्रदूषणमा बढी ध्यान दिन आवश्यक छ, जसले COVID-१ associated सँग सम्बन्धित जोखिमहरूलाई पनि बढाउँदछ।
हामीले जलवायु परिवर्तनको गहिरा खतरालाई तत्काल सम्बोधन गर्नै पर्छ। ग्लोबल वार्मिंग १. 1.5 डिग्री सीमित गर्नाले वायु प्रदूषण, मृत्यु र रोग लाई कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। यस बर्षको लकडाउनको कारण उत्सर्जन नाटकीय रूपमा खस्कियो, धेरै शहरहरूमा सफा हवाको झलक प्रदान गर्दै। तर उत्सर्जनहरू पहिले नै फेरि बढ्दै छन्, केहि स्थानहरूमा पूर्व-COVID स्तरहरू पार गर्दै।
हामीलाई नाटकीय र प्रणालीगत परिवर्तन चाहिन्छ। प्रबलित वातावरणीय मापदण्डहरू, नीति र कानूनहरू जसले वायु प्रदूषकहरूको उत्सर्जन रोक्दछ पहिले भन्दा पहिले भन्दा बढी आवश्यक पर्दछ। देशहरूले पनि जीवाश्म ईन्धनहरूको लागि सब्सिडी अन्त्य गर्न आवश्यक छ। र, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, देशहरूले एक अर्कालाई सफा टेक्नोलोजीमा सहयोग पुर्‍याउन सहयोग गर्नु आवश्यक छ।
विकासोन्मुख देशहरूमा जीवाश्म ईन्धन सम्बन्धी परियोजनाहरूको लागि वित्त प्रदान गर्ने सरकारहरूलाई मद्दत गर्दछु कि स्वच्छ ऊर्जा र दिगो यातायाततर्फ सहयोग पुर्‍याउन। र म सबै देशहरूलाई पोष्ट- COVID पुन: प्राप्ति प्याकेजहरू स्वस्थ र दिगो रोजगारीका लागि संक्रमणलाई समर्थन गर्न प्रयोग गर्न आग्रह गर्दछु।
September सेप्टेम्बर, निलो आकाशका लागि पहिलो सफा एयरको अन्तर्राष्ट्रिय दिनको रूपमा मनाउँछ। हामी सबै सँगै स्वच्छ हावाको साथ अझ राम्रो भविष्य निर्माण गर्न सँगै मिलेर काम गरौं। ”
संयुक्त राष्ट्र संघको निलो आकाशका लागि सफा एयरको अन्तर्राष्ट्रिय दिन हावा प्रदूषण अब स्वास्थ्यको लागि सबैभन्दा ठूलो वातावरणीय खतरा हो भनेर हाइलाइट गर्दछ, तर यो रोकथाम योग्य छ। हामीसँग यसलाई परिवर्तन गर्न समाधान र प्रविधि छ। हाम्रो हावाको गुणस्तर सुधार गर्न हामीलाई बोर्डमा सबैजना चाहिन्छ - व्यक्तिहरूबाट निजी कम्पनीहरूमा सरकारहरू।
वायु प्रदूषण हाम्रो सामूहिक भविष्यको हिस्सा हुनु आवश्यक छैन। सफा हावाले हामीलाई स्वस्थ बनाउनेछ, प्रकृति संरक्षण गर्नेछ र विश्वव्यापी मौसम परिवर्तन लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
तपाईं हावा खाली गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ?
कुराकानीमा शामिल हुनुहोस्: #CleanAirForAll
WMO Photostream / अन्ना Zuidema द्वारा ब्यानर फोटो